Hawlaha Wax Dhaafinta: Nadiifinta Plattsburgh PCB - Ellicott Dredges
Hawlaha Wax Dhaafinta: Nadiifinta Plattsburgh PCB
Source: Jim Gordon Warka & Xogta Clearwater
Dhameystirka mashruuc qashin-jabinta PCB oo ku taal harada Lake Champlain ee Plattsburgh, NY, waxay muujisay in PCB-yada si amaan ah looga goyn karo Webiga Hudson. Guryaha xeebta ku teedsan ee Lake Champlain ayaa ahaa kuwo aan degganeyn, xeebaha dabaasha iyo moteellada ayaa furan intii lagu jiray howlihii saddexda sano ahaa, kuwaaso hore shaki uga qabay daadinta ayaa hadda amaanaya howlgalka.
Markii hore ma taageerin. Waxaan ka walwalsanaa walaaca walaaqaya. Micno badan iima samaynaynin, 'ayuu yiri Dr. Djell Dahlen, oo ah dhakhtar qalliin ku takhasusay oo gurigiisa qaaliga ah isla markaaba ku dhagan goobta xeebta 34-hektar ku taal ee Cumberland Bay. Laakiin sida daris dhow ah, wax yar iima dhibin. '
'Ducks waxay fadhiisteen ceelkii intii ceelku sii socday,' ayuu yiri Bill Ebert, kormeeraha goobta ee injineerka mashruuca Earth Tech Inc. Goobtu waxay u dhowdahay magaalada iyo xeebaha gobolka, iyo sidoo kale motellada. Xeebuhu way furnaayeen. Hoteellada ayaa furan. Wax walba waxay u socdeen si caadi ah, 'ayuu yiri. Howlgalka qodista ayaa sii socday 24 saacadood maalintii, laakiin wax cabasho ah kama helin, ayuu yiri Ebert. 'Mararka qaar dadka gogosha ku leh hudheelka ayaa kugu soo ruxruxi doona.'
Nadiifinta PCB ee harada Lake Champlain waxay la mid tahay caqabado badan oo la mid ah hawlgalka qashin-qubka ee ka socda Hudson wuxuu noqon karaa mid wali, laakiin waxaa lagu dhammeystirey waqtigiisa, iyadoo la raacayo miisaaniyad, iyada oo aan wax kicin kara wasakhooyinka. Hawlgalku wuxuu ka saaray 25,000 rodol oo PCB ah oo saafi ah, isaga oo naaqusay wasakheynta goobta in ka badan boqolkiiba 90, halka ay ka heshay ammaan dariska.
Guushaasi way fududaan lahayd in lagu nuqulo webiga Hudson, sida ay sheegeen injineerada mashruuca ee kormeeray qoditaanka Plattsburgh. 'Teknoolojiyadda waxay u joogtaa inay si sax ah u sameyso, waa inaad dejiso oo aad xakameysaa,' ayuu yiri Lech Dolata, oo ah injineer ka tirsan Waaxda Ilaalinta Deegaanka ee gobolka. 'Qeybta ugu hooseysa ayaa ah, qashin qubka ayaa shaqeynaya.'
Dolata waxay muujisay hab fudud oo wax ku ool ah oo qashin-qubka ah oo looga takhaluso qulqulaya PCB-xayran. Markab yar oo gaar ah, oo dhererkiisu yahay dhererkiisu yahay 20 cagood, ayaa lagu meeleeyaa iyada oo la adeegsanayo isku xirka meerisyada caalamiga ah (GPS) xiriiriyeyaasha tooska ah ee khadka tooska ah, hawlgalkuna wuxuu ku socdaa xargaha waaweyn iyada oo la adeegsanayo fiilooyin la jiiday dariiqa la doonayo in lagu dhaqaaqo qulqulka. Howlgalku waa mid siman, duurjoogta iyo dariska ayaa si aan caadi aheyn u ogsoon.
Dhulka dushiisa, aalad siddeed-dhudhun ah oo roto-tiller-u eg ayaa jabisa weelka oo ku riixeysa gudaha, halkaas oo tuubbo faakiyuhu ay ku tuuraan weel daboolan. Daahyada xarkaha iyo caqabadaha kale ee biyaha hoostooda ayaa xannibaya wixii cilad ah ee ku jira, laakiin Plattsburgh waxaa jiray wax yar oo kicinta xayndaabyada si kasta oo ay tahay.
Hay'adda Georgia Pacific Corporation waxay ka shaqeysaa tuubada qalliinka gudaheeda konton fiit oo ka mid ah goob la jeexjeexay, waxayna u baahan tahay caddeynta biyaha oo aan ka badneyn qeybaha 2 bilyan ee walxaha xayiran. Ebert wuxuu sheegay in hawl-wadeennada biyo-goynta ay si joogto ah u tijaabiyaan, laakiin had iyo jeer lagu hayo shuruudaha adag, oo ay tuubadu awood u yeelan karto inay furnaato inta lagu gudajiro howlaha qulqulaya.
Mar alla markii la soo dego wajiga waxa loo dejiyay si loo yareeyo culeyska loona tijaabiyo sunta. Sunta halista ah ee ka timaadda Plattsburgh waxaa loo diray Buffalo si ay wax u gubto, halka wasakhda wasakhda ah ee wasakhaysan loo daadgureeyay goobta qashin-qubka ee Quebec. Biyuhu waa la daweeyay oo waxay ku soo noqdeen harada Lake Champlain. Tijaabooyinku waxay muujiyeen inay nadiif tahay oo ay kufiican tahay cabitaanka biyaha cabitaanka.
Shirkadda General Electric, waa shirkadda mas'uulka ka ah sumowga PCB ee ka dhigaysa Hudson xarun Superfund federaal ah, waxay ku andacootay daadinta inay carqaladeynayso deegaanka dabiiciga ah ee webiga isla markaana ay qalajin doonto dhaqaalaha maxalliga ah. GE waxay hada ku bixisaa malaayiin doolar usbuucii xayeysiinta telefishanada oo muujineysa xadidaada dhoobada dhoobada daadinta. Laakiin sida laga soo xigtay saraakiisha EPA iyo DEC, xirmooyinka duulimaadyadu waa socod-barasho, maahan biyo-kama-dhibcaan deegaan, mana tixgelin doonaan nadiifinta sunta GE ee lagu daadiyay webiga. Sida ku xusan sharciga federaalka, hay'adda caalamiga ah ee caalamiga ah ayaa mas'uul ka ah saaridda sunta, kharash GE ma doonayo inuu bixiyo.
In kasta oo General Electric uu hal milyan oo rodol ama in ka badan oo PCBs ah ku daadiyay webiga, haddana dhammaantiis isku meel ma wada aha, laakiin wuxuu ku faafay ilaa 40 'goobo kulul' oo webiga u dhexeeya Glens Falls iyo Albany. Sunta ayaa ka guuraysa meelahaas, waxayna galaysaa silsiladda cuntada, safka biyaha, dhoobada xeebta, iyo hawada. Qalabka qodista waxaa lagu cabirayaa cabirka looga baahan yahay goob kasta oo kulul. Qalabka kala daadinta faleemka iyo nadiifinta biyaha waxaa lagu dhaamin karaa gudaha iyo dibedda meelaha looga baahan yahay, iyadoo lagu soo koobayo farsamadii loo adeegsaday Plattsburgh. Looma baahna xarumo daaweyn joogto ah.
USEPA waxay diyaar u tahay inay ku dhawaaqdo go'aan ku saabsan dawooyinkeeda ku saabsan faddaraynta PCB-yada ee Webiga Hudson u rogay goobta ugu weyn ee sunta sunta aan dawliga ahayn ee Mareykanka.
Deegaanka Cumberland Bay ee Plattsburgh ee ku dhexyaala Lake Champlain wuxuu ahaa goob Class Second Superfund ah, oo khatar khatar ku ah caafimaadka aadanaha iyo deegaanka. Isugeynta PCB celcelis ahaan celcelis ahaan xNUMX qaybood halkii milyan. Isugeynta 2000 ppm ayaa si rasmi ah loo arkaa inay tahay mid khatar ah. Nadiifinta PCB ee harada Lake Champlain waxay hoos u dhigtay culaysyada celcelis ahaan ah 50 ppm.
Goobtu waxaay ka koobneyd sideed hektar oo dhul-beereed ah iyo 50 acres ah oo harada harada hoostiisa ah, halkaasoo ay ku urursan jireen PCBs. Markii shaqadu dhamaato oo qalabkii meesha laga saaro, Plattsburgh wuxuu go’aaminayaa in goobtu noqon doonto doon doon, ama lagayaabo baarkin. Dr. Dahlen, oo ku raaxeysanayay ku raaxeysashada shaqaalaha hawlgalka burburka, ayaa si qosol leh u sheegay in uu doorbiday baarkinku in uu raaco doonnida, laakiin waxa uu intaa raaciyay in midkoodna laga doorbido goobta qashinka khatarta ah.
Waxaa laga daabacay Warka & Xogta Clearwater Web Site
Wixii macluumaad dheeraad ah fadlan kala xiriir:
Paul Quinn, Madaxa iibka